बुबा-छोरीको गलत विवाह “प्रेमपूर्ण” भएको दाबी :: NepalPlus
बुबा-छोरीको गलत विवाह “प्रेमपूर्ण” भएको दाबी
नेपालप्लस संवाददाता२०७८ साउन १६ गते ६:५४
“केटी (नाम) गर्भवती छिन् । बुबाले उनीहरू जोडी जस्तो महसुस गर्छन् । मेरो बुवा … ऊ शैतान हो, ऊ ….शैतान। ऊ नरकमा जान्छ, तर ऊसलाई सजायँ हुने छैन । उसले अरू मानिसहरूलाई यातना दिनेछ ।” एक युवती उनको बुबा र उनको बहिनीबीचको सम्बन्धको वर्णन गर्छिन् ।
कथा एक जवान जोडीबाट शुरु हुन्छ । स्टीभन प्लाद र एलिसा गार्सियाकोबिचको जोडी । दम्पतीले इन्टरनेटमा भेटे । तुरुन्तै यसलाई बन्द गरे । त्यस समयमा प्लाद २० मा थियो जबकि गार्सिया पन्ध्र वर्षकि थिईन् ।
जोडीले आफ्नो पहिलो छोरी डेनिसलाई सन् १९९८ मा दुई वर्षको सम्बन्धपछि स्वागत गरे । प्लाड र गार्सियाले छोरीको जन्मपछि बल्ल बिहे गरे।
नवजात छोरीलाई पतिले दुर्व्यवहार गरे । प्लाडले डेनिसलाई निर्मम तरिकाले निरन्तर कुटपिट गरिरहे । बच्चामा धेरै चोटपटक लाग्यो । कहिलेकाँही उनले डेनिसलाई कूलर (चिसो हावा फाल्ने मेशिनभित्र) मा राखिदिए र कूलरमा अक्सिजन नसीद्दिउन्जेल उनलाई त्यहीं छोडेर हिंडे ।
यसैले, गार्सियाले न्यु योर्कका दम्पती एन्थोनी र केली फस्कोलाई धर्मपुत्री बनाउन दिएर आफ्नो बच्चालाई पतिबाट जोगाउने निर्णय गरिन् । फस्कोसले बच्चाको नाम परिवर्तन गर्‍यो, केटी ।
प्लाड र गार्सियाले पछि अरू दुई छोरीलाई पनि जन्माए । तर ती दम्पतीले उनीहरूको विवाहमा धेरै तनावको सामना गरिरहेका थिए । गार्सियाले आफ्नो पति धेरै हिंस्रक, अल्छी र जागिर खोज्न अल्छी गर्ने भनेर वर्णन गरिन् ।
केटीले एक सन्देश खोलिन (डिएम) उनीसँग हुनु हुँन्थेन । अठार वर्षसम्म छोरीलाई धर्मपुत्री बनाउने त्याग गरिसकेपछि प्लाड र गार्सियाले सोशल मिडियामा उनको एउटा सन्देश प्राप्त गरे । केटीको मूल योजना कलेजमा भर्ना गर्नु र कलाको अध्ययन गर्नु थियो ।
तर, उनले आफ्नो जैविक अभिभावक पत्ता लगाएपछि आफ्नो योजनाहरू द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिन् । केटी आफ्ना जैविक आमा बुबा र आफ्ना दुई साना बहिनीहरूसँगै सरिन् । खराब स्थितिमा पुग्ने, बदलिने बेला कहिलेकाहिँ त्यस्तै हुन्छ भनिन्छ । त्यस्तै भयो ।
केटीको आगमनले उनको जैविक अभिभावकको विवाहमा तनाव मात्रै बढायो । र, केटीको जैविक आमा गार्सियाका अनुसार उनको श्रीमानको व्यवहार पनि परिवर्तन भयो ।
प्लाडले आफ्नो दाह्री कपाल मिलाएर र आफ्नो तख्ताका सामान मिलाएर, बदलेर जवान देखिने प्रयास गरे । उसले केटीको शयनकक्षको भुइँमा रात बिताउनपनि शुरू गर्यो ।
धेरै अनौंठो आकर्षण
धेरै छोटो अवधिमा, केटी र प्लाडबिच छुट्टिनै नसक्ने अवस्था वृद्धि भयो । गार्सियाले केटीलाई उनी बच्चा हुँदा आफ्ना बाउले दुरुपयोग गरेको घटना बताएर चेतावनी दिएकी थिइन । तर, त्यसले केटी र प्लाडलाई टाढा बनाएन । बरु केहि कारणले केटी र प्लाड बीचको सम्बन्ध झन बलियो भयो ।
सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको बुबा र छोरी (रोमान्टिक) प्रेममा परेका थिए । नोभेम्बर २०१६ मा गार्सियाले सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिएर घरबाट बाहिर निस्किईन् । यसपछि केटीको आफ्नो जैविक बुबा प्लाडसित बस्ने क्रम जारि रह्यो ।
अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको केही महिना पछि गार्सियालाई अनैतिक सम्बन्धको बारेमा थाहा भयो । उनले आफ्नो एघार वर्षीया छोरीको पत्रिकामा सन्देश (नोट) पढेर यो पत्ता लगाइन् ।
११ वर्षीया केटीले पत्रिकामा उनको बुबा स्टीभनको बारेमा लेखिन्: ‘ऊ शैतान हो । उ फ…..किङ सैतान हो । ऊ नरकमा जान्छ, तर उसलाई यातना दिने व्यक्ति कोहि हुनेछैन । ऊ मान्छेलाई यताना दिने व्यक्ति हुनेछ ‘- dailymail.co.uk
“केटी गर्भवती छिन् । बुबाले उनलाई जोडी जस्तो महसुस गरेको बताउँछन् । के त्यस रात उनीहरूले अलि धेरैपिए ? मेरो बुवा जो छ …..ऊ शैतान हो । शैतान …. ऊ नरकमा जान्छ । तर उसले यताना ब्यहोर्नुपर्ने छैन । उसले अरु मानिसहरूलाई कष्ट दिने छ। पर्ख, यदि बुबा शैतान र केटी मानव हो भने बच्चा आधा राक्षस हुनेछ । ”
गार्सिया यो तथ्यबाट त्रसित भईन् । उनले तुरून्त आफ्नो पूर्व पतिलाई फोन गरिन् । उनीहरुको बिचमा टकराव भयो । र, प्लाडको प्रतिक्रिया थियो “मैले त सोचेको थिएँ कि हामी प्रेममा छौं भन्ने तिमीलाई थाह थियो ।”
गार्सियाले पछि प्रहरीलाई यो अपमानबारे खबर गरिन् । तर, त्यसपछि न केटी न त प्लाडनै पक्राउ परे ।
(डेली मेलमा प्रकाशित यहाँका दुबै तस्विरमध्ये पहिलोमा कालो धब्बा थिएन । गोपनियताका हिसाबले नेपालप्लसले कालो पोतो लगाएर प्रकाशित गरेको हो । आलेख मेडियम डेलीबाट नेपालीमा भावानुवाद गरिएको हो-संपादक)